Mpanjaka avy amin-kery – filazantsaramada
Mpanjaka avy amin-kery
Publié parfilazantsaramada	 décembre 7, 2012 Laisser un commentaire sur Mpanjaka avy amin-kery
« Ka ho reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina. Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. » Lio.21: 26-27
Ny maha iray ny Baiboly dia ny fifamenoana sy ny fifandraisan’ny boky rehetra mandrafitra azy, indrindra fa ny fahatanterahan’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Testamenta Vaovao. Izao Teny eto amin’ity Filazantsara ity izao dia manambara indrindra ny amin’ny zavatra hitranga aorinan’ny nanoratana ny Testamenta Vaovao.
Ny faminaniana rehetra voasoratra ao amin’ny Baiboly dia ho tanteraka avokoa, fa isika tsirairay no asa raha hahatratra ny fahatanterahan’izany faminaina izany na ho tonga alohan’izany ny fetrandro ka tsy ho hitan’ny masontsika ny fahatanterahan’izany.
Ny andro Noely dia fahatsiarovana ny andro nahateran’ny Mpamonjy, dia i Jesosy Kristy, Ilay Teny tonga nofo. Tena tonga nofo tokoa ny Teny ka niara-nonina tamintsika, nambaran’ny Soratra Masina mialoha izany tao amin’ny Testamenta Taloha, ary tanteraka ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny zavatra tena nokendren’Andriamanitra tamin’ny nanomezany ny Zanany dia ho fanavotana sy ho famonjena izay rehetra mandray ny Zanany eo amin’ny fiainany, ary voalaza fa omeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra izany olona mandray Azy eo amin’ny fiainany izany.
Raha fintinina dia nitady Fihavanana tamintsika olona noforoniny Ilay Andriamanitra Nahary. Jesosy Kristy no nataony ho Fampihavanana antsika. Efa vita izany iraka nampanaoviny ny Zanany izany, fa ny anjarantsika tokony horaisintsika no miandry ny fanampahan-kevintsika.
Eto amin’ity Lioka 21:26-27 ity dia tsy Ilay Andriamanitra mitady fihavanana intsony no aseho eto, fa Ilay Andriamanitra hiseho amin’ny alalan’ny Zanany, Ilay antsoina amin’ny anarana hafa hoe Zanak’olona. Ny fisehoany eto dia tsy miafinafina intsony, fa fisehoana amin-kery sy amim-boninahitra lehibe. Mifanohitra amin’ilay tamin’ny andro Noely, izay nanehoana fanetren-tena tokoa satria Zaza (tsy olon-dehibe akory) teraka tao an-tranon’omby, tsy trano madio na efitrano fitsaboana madio fa fihinanambilona, ary dia ambara ao amin’ny bokin’i Mika 4:1 ny amin’ny tsy fiafinafenana intsony fa amin’ny fomba miharihary: « ny tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah dia haorina eo an-tampon’ny tendrombohitra ary hasandratra ho avo noho ny havoana ». Fiandrasana tena samihafa amin’ilay andro fahatongavany tamin’ny andro Noely!
Ny zazakely dia manambara fahatsorana, manambara fiankinana amin’izay mpitaiza azy, manambara fahalemem-panahy.
Ny eto kosa dia manambara fahaverezan-tsaina ny amin’ny zava-miseho:
Hisy famantarana eo amin,ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Mitebiteby ny olona noho ny zava-miseho.
Manao ahoana moa ny manjo ny olona zatra mipetraka amin’ny toerana milamina rehefa tratran’ny tabataba amin’ny alina ary tsy mahita tory mihitsy, ary toy izany ity ambara eto amin’ny Lioka. 21:25 ity : « ary etỳ ambonin’ny tany dia hisy fahorian’ny firenena amin’ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondrohon’ny ranomasina sy ny fanonjany ». Raha vao miakatra 3 na 5 degre mihoatra ny hafanana mahazatra isika dia efa mimenomenona, tsy andry ny hamonjena aloka mba hialofana, ary tsy hiresaka intsony ny amin’ny voka-dratsin’ny « tsunami » izay miteraka fahafatesan’ny olona an’etsiny amin’ny indray mipi-maso.
Maro ny zavatra mety hiteraka ny fahaverezan-kevitra , nefa noho izany rehetra izany mitambatra dia ho reraka ny fon’ny olona. Rehefa misesisesy ny loza, izay mety tsy ho voazavan’ny olona intsony ny fihaviany, dia eo no ho tonga ny faharerahan’ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany.
Tena hisy zavatra ho tonga tokoa aorian’izany fa ny Soratra Masina no mampiomana antsika; Fa ny herin’ny lanitra hohozongozonina, ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy.
Inona no tokony ataontsika ary amin’izany rehetra izany?
Ny Soratra Masina dia manambara: « rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra. Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana. Fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. » Heb.10:37-38. Fotoana tsy tokony hampiraviravy tànana ny olon’Andriamanitra mihitsy izany fotoana izany, fa voa mainka hampandroso ara-panahy.
Fotoana tokony hisehoan’ny firaisan’ny mino an’i Jesosy Kristy izany fotoana izany: « Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra. »Rom.15:6.
Ny zavatra tokony hiomanantsika dia ny amin’ny mbola hitsanganantsika eo anatrehan’ny Zanak’olona. Tokony hiambina isika: « Fa miambena ka mivavaha mandrakariva » Lio.21:36.
Mbola fotoana mety izao anio izao, satria na dia efa akaiky aza izany rehetra izany dia omen’ny Tompo Jesosy fahafahana isika hisafidy ny hanome Azy ny fanjakan’ny fontsika. Mety tsy mandany 1 minitra akory ny fanaovantsika izany fanekena izany, izany fandraisantsika Azy izany amin’izao fahavelomantsika izao, nefa aoka isika hitandrina fa rehefa amin’ny fihaviany dia tsy ho vitantsika intsony izany fandraisana Azy izany. Mbola fotoana mety ary izao. Mbola mitady fihavanana amintsika Izy. Andeha raisintsika ao ampo Izy: Midira ao am-poko Jesosy izao anio izao! Na andeha hanavao ny fandraisantsika Azy ao am-po!
Jesosy hampahery anao.
Publié parfilazantsaramada décembre 7, 2012 Publié dansUncategorized
Manao ahoana no tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra?